Groove: Rubatsiro padhesiki Tiketi yeMatambi Ekutsigira Martech Zone
Chitatu, December 23, 2015 Douglas Karr
Kana iwe uri inbound yekutengesa timu, revatengi timu yekutsigira, kana kunyangwe iyo agency iwe unoziva nekukurumidza kuti tarisiro uye mutengi zvikumbiro zvinogona kurasikirwa sei mune tidal wave emaema ayo munhu mumwe nemumwe anogamuchira online. Panofanirwa kuve nenzira iri nani yekutora, kupa, uye kuteedzera zvese zvikumbiro zvakavhurika kukambani yako. Ndipo panowanikwa software yekubatsira tafura uye inobatsira kuona timu yako yakanangana nekuteerera kwavo uye nebasa revatengi.
Groove Pamhepo Kutsigira Tiketi Sisitimu Zvimiro
Tiketi Yezvikwata - Govera matikiti kunhengo dzechikwata chaicho kana mapoka. Wedzera zvakavanzika manotsi izvo iwe chete nechikwata chako zvamunogona kuona. Bvunza mibvunzo, ita mazano, kana kuongorora mameseji kubva kunhengo dzechikwata nyowani vasati vatumirwa. Ona chaizvo zviri kuitika muGroove mune chaiyo-nguva. Iwe uchazoziva kana matikiti apihwa, apedzwa, avhurwazve, kana kuyerwa.
Tsanangudzo yemutengi info - Hapasisinazve kuvhima matikiti ekare kuti uone zviri kutaurwa nemutengi. Famba chero yevatengi nhoroondo yekutsigira nekamwe chete.
Kugadzira Zvishandiso - Sevha mhinduro kumibvunzo yakajairika, uye woisa nekukanda mune chero meseji. Gadzira mavara echinyakare ekuronga matikiti kana kumaka iwo kuitira ramangwana uchishandisa chero hurongwa hunoshanda zvakanyanya kwauri. Shandisa mitemo kugadzirisa mashandisiro anoita matikiti. Semuenzaniso, ipa tikiti kunhengo yechikwata zvichibva nekwavanobva, kana kumira mameseji anosanganisira izwi urgent.
enamel - Groove's dambudziko tikiti system rinotaridzika uye rinonzwa chaizvo senge email kune ako vatengi. Vatengi vako havazombofaniri kupfuura nedzimwe nzira dzekupinda mukati kana kutarisa nhamba yetikiti kuti uwane rubatsiro.
Social Media - Ona uye upindure maTweets neFacebook madziro zvinyorwa zvinotaura nezvechiratidzo chako, uye zvinoshandura zvirinyore zvemagariro kuva matikiti ekutsigira.
Tevera rutsigiro rwefoni - Rongedza zvakadzama manotsi ekukurukurirana kwefoni uko kunogona kuchengetwa setikiti, saka ivo vanozozviratidza munhoroondo yemutengi wako uye iwe unogona kunongedzera kwavari chero nguva.
Kugutsikana Kuyera - Rega vatengi vako vayere mhinduro dzako uye vupe mhinduro.
Knowledge Base - Batsira vatengi vako vepamhepo kuti vazvibatsire ne base base.
Groove Kutsigira Tiketi Kubatanidzwa
Widget - Groove's rutsigiro widget inova nechokwadi chekuti vatengi vanogara vachiziva nzira yekubata, uye inogona kuve yakagadzirirwa kuti unzwe sechikamu chisina musono chesaiti yako.
API - Shandisa yedu API kudhonza data remutengi kubva kune yako yemukati CMS, kubhadharisa app, kana chero imwe bato rechitatu software, uye wozviona mune yako mutengi profaera padhuze chero tikiti.
Live Chat -Iviri-nhanho SnapEngage kana Olark mhenyu hurukuro yekubatana kuti uchengete makuwe ako kuGroove uye utsigire vatengi vako mune chaiyo-nguva.
CRM - Batanidza Groove kuenda kuHighrise, Batchbook, Nimble, Zoho kana Capsule uye uwane nyore kuwana kune yakadzama ruzivo rwevatengi kubva kuCRM yako, inoonekwa padyo netikiti rega rega. Kana izvo zvisina kukwana, ivo vanopa kusangana neZapier.
enamel - MailChimp, Campaign Monitor, uye Kubatana kweKunowirirana.
usimbe - kubatanidzwa zvakananga kuchikwata chako chekutaurirana.
buri inobhadhara-se-iwe-kuenda system kwaunogona kuwedzera uye kubvisa vatengi kubva kuaccount yako, uchibhadhara madhora gumi nemashanu pamushandisi pamwedzi.
Tanga Yako yemazuva makumi matatu Yemahara Muedzo
Tags: API widgetBhukuCampaign MonitorCapsuleConstant ContactgroobeGrooverubatsiro tafura widgetHelpdeskHighrisemailchimpNimbleOlarkSnapEngagetsigirasangano rekutsigiratsigira widgetmapokachikwangwanizapierZoho
Ndira 5, 2017 na11: 54 PM
Ndatenda nekugovana ruzivo rwakakura nezveHelpdesk Tiketi system, kuti inobatsira sei kutsigira zvikwata ..